GlobalNet | GlobalNet expands its network to Naypyitaw
GlobalNet expands its network to Naypyitaw
GlobalNet expands its backbone datacenter, fiber infrastructure and transmission capacity to Naypyitaw in recent months.
Due to the popular brand and 20 years of unparalleled experience of the company, domestic and internet connectivity services have become breakthrough and first choice among government offices and NGO offices in Naypyitaw.
GlobalNet playsamajor role in the market by joining more than 3000 businesses of all sizes.
GlobalNet ရဲ့ backbone datacenter, fiber infrastructure နှင့် transmission capacity တို့အား နေပြည်တော်တွင် မကြာသေးမှီအတွင်း ချဲ့ထွင်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
GlobalNet သည် နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျော်အတွေ့အကြုံများရှိရုံ သာမက နေပြည်တော်ရှိ အစိုးရရုံးများ၊ NGO အဖွဲ့အစည်းများ အကြားတွင် ပထမဦးစားပေးရွေးချယ် ခံရသည့် နာမည်ကောင်းဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုနေသော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း အစုအဖွဲ့ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ လုပ်ငန်းများ အနက် GlobalNet သည် အမျိုးအစားအစုံ လုပ်ငန်းပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော် ကို ဝန်ဆောင်မှု့ ပေးနေသော ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာအသိုင်းအ၀ိုင်းများအကြား Market Leader Company တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။
? Learn more: www.globalnet.com.mm
Banks တွေမှာ ပိုက်ဆံတွေထားတာ နဲ့ ...
6 Ways to Deliver...
ကျွန်တော်တို့ GlobalNet Company အနေဖြင့် ...